काठमाडौं । आज शनिबार देशभर कोरोनाका १ हजार ४१ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा सो संख्याका संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। यीसहित हालसम्म..
चितवन । चितवनको भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मोबाइलमै पठाउन शुरु गरेको छ । भरतपुर अस्पताल मातहत रहेको प्रयोगशालाले आजदेखि मोबाइलमै रिपोर्ट पठाउन शुरु गरेको हो । अस्पतालका इन्जिनीयर..
रासस । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश सामाजिक कार्य बन्द छन्। बागलुङ नगरपालिकाले भदौ ३ गतेदेखि समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्रियाकलापलाई बन्देज गरिएको छ तर..
काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा देशभर थप ५२५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले उपत्यकाका १२७ सहित ५२५ जनामा..
काठमाडौं । मंगलबार ६३८ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २३ हजार ९४८ पुगेको छ । तीमध्ये सात हजार..
Posted on Aug 02 2020
काठमाडौं । शुल्क लिएर कोभिड–१९ आरटी (पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको एक निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ । सरकारले तोेकेको शुल्कभन्दा एक हजार कममा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको..
एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी
काडमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक साताभित्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि देशभरबाट सम्पूर्ण विवरण आइसकेको र अहिले हार्डकपी एवं सफ्टकपी..
काठमाडौं । नेपालमा बिहीवार थप १४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८ हजार २४१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीवार आयोजना गरेको..
आज कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित भए ?
काठमाडौं । नेपालमा आइतबार थप १८६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ८४४ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीका ६, झापाका ३, इलामका..
काठमाडौं । कोरोना भाइरस हावाको माध्यमबाट पनि फैलनसक्ने दाबी वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् । ३२ देशका २३९ वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस रोग हावाबाट सर्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार भाइरसको सानो..
काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा नेपालमा ४५१ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । जसमा ३५ महिला र ४१६ जना पुरुष रहेका छन् । सोमबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका..
भोलिदेखि विराटनगर ‘लक डाउन’
काठमाडैं । कोभिड १९ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सतर्क रहने क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि अर्को सूचना जारी नगरुञ्जेलसम्मका लागि लक डाउनको घोषणा गरेको छ। सोमबार महानगरपालिकामा करिब १ घण्टा सरोकारवाला निकायसंगको छलफलपछि..
काठमाडौंमा एक जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौ । काठमाडौंमा एक जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) का संक्रमण देखिएको छ। सोमवार स्वास्थ्यमन्त्रालयमा आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा संक्रमण देखिएको बताइएको हो। फ्रान्सबाट चैत ४ गते मंगलवार फर्किएकी १९ वर्षीया..
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन विकास गरिएको खोप पहिलो पटक मानिसमा परीक्षण गर्न लागिएको छ । अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको खर्चमा सुरु गर्न लागिएको परीक्षणमा ४५ जना वयस्क अमेरिकी स्वयंसेवी..
तीनपाने रक्सीबाट स्यानिटाइजर बनाउन सिकाउदै नाष्ट
काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का वैज्ञानिकले आफ्नो कार्यकक्षमा स्वास्थ्यवर्द्धक तालिम सञ्चालन गर्ने भएका छन् । चीनबाट फैलिएको ‘कोभिड–१९’ को संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिने उद्देश्यका साथ हात..
एक हप्ता मै मास्क थप उत्पादन गरी बजारमा पठाउने
काठमाडौं । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै मास्क थप उत्पादन हुने भएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड) १९० को संक्रमण विश्वभर फैलिरहेको बेला मंगलबार मुख्यसचिव..
१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दै मेडिसिटी हस्पिटलविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलविरुद्ध १० करोड रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्तिको मागसहित पूर्वसांसद गायत्री साहले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद १० बमोजिम..
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि डा भगवान कोइरालासहित तीन जनाको नाम सिफारिश गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपति चयन गर्नका लागि गठित सिफारिश समितिले पहिलो नम्बरमै डा। भगवान..
आफु खुशी शुल्क लिन नपाएपछि १८ वटा मेडिकलले यो वर्ष विडिएस र एमविविएसमा नयाँ भर्ना नलिने
काठमाडौँ । १५ वटा निजी मेडिकल कलेज र तीन वटा डेन्टल कलेज गरी १८ वटा कलेजहरुले यो वर्ष एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै..
कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं । कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केहिबेरअघि नतिजा प्रकाशित गरेको हो । गत जेठमा कक्षा ११ को परीक्षा भएको थियो । देशभरबाट पाँच लाख..
संविधान दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडीतर्फको टिकट आज निःशुल्क
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहिरङ्ग ९ओपिडी० तर्फको टिकट निःशुल्क हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानबाट ओपिडीतर्फको टिकट आज निःशुल्क हुने..
कति घण्टा सुत्ने ? उमेरको हिसाबमा थाहा पाउनुस्
काठमाडौं । स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि पौष्टिक आहारका साथसाथै पर्याप्त निद्रा पनि आवश्यक हुन्छ । तर आजकल विभिन्न कारणवश मानिसहरू पर्याप्त सुत्दैनन् । यसले गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी कैयौं समस्याहरू आउँछन् । अमेरिकाको..
अब डक्टर पढने ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति, भोलि एमबीबीएसको प्रबेश परिक्षा
काठमाडौं। शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अध्ययनमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको प्रावधान लागू गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम..
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, कतिले कुन जीपीए ल्याए, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बेलुकी सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार उच्च तह ३.६१ देखि ४.०० जीपीए प्राप्त गर्ने..
कक्षा १२ को नतिजा आज, सवै विषयको एकै पटक नतिजा प्रकाशन हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार आइतबार परीक्षार्थीको सम्पूर्ण प्राप्ताङ्कलाई रुजु गरेर कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिसकिएको छ। आइतबार रुजु गर्ने क्रममा..
नेपालका ६३ विद्यालयमा चिनियाँ भाषा
काठमाडौं उपत्यका तथा आसपास ६३ निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइने गरिएको छ । ती विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त विषयका रूपमा चिनियाँ भाषा पढाउने गरेका हुन् । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो उपस्थिती, चिनसँगको..
काठमाडौं । एसईईको नतिजा आइसकेको छ । जसमा ४ लाख ४९ हजार ६४२ को नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी जीपीए ३.६० देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउनेको संख्या १६..
एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कुन ग्रेड आयो यसरी हेर्नुहोस्
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले हिजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरे पनि केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले आज..
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालमा लिएको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल बिहीबार (आज) प्रकाशित गर्ने भएको छ । बुधबार सार्वजनिक हुने भनिएपनि केही प्राविधिक कुराले गर्दा आज मात्र परिक्षाफल प्रकाशित हुने..
एसइईको नतिजा आज सार्वजनिक हुने, यसरी हेर्नुहोस नतिजा
भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसइई परीक्षाको नतिजा..
Results 222: You are at page 1 of 8